Orylọ ọrụ nrụpụta mmiri - China ndị ọrụ nchekwa mmiri, ndị na-eweta ya
1.Overview The wireless ime akara nwere ọgụgụ isi ike ndụ buoy bụ obere elu-azọpụta ndụ na-azọpụta robot na ike ga-arụ ọrụ remotely. Enwere ike iji ya mee ihe na nnapụta nke mmiri na-ada na ọdọ mmiri, ọdọ mmiri, osimiri, osimiri, ụgbọ mmiri, ụgbọ mmiri, na idei mmiri. A na-ahụ maka akara ntanetị site na njikwa ntanetị, na arụmọrụ ahụ dị mfe. Ebuputaghị ọsọ bụ 6m / s, nke nwere ike ịbịakwute onye dabara na mmiri maka nnapụta. Nedgba ọsọ dị mmadụ bụ 2m / s. Enwere hi ...
Nchịkọta ROV-48 Mmiri na-ahụ maka mgbatị mmiri bụ obere igwe na-enweghị mmiri na-achọ mmiri na nnapụta robot maka ọkụ ọkụ, nke a na-ejikarị iji zọpụta mpaghara mmiri na ndapụta dịka ọdọ mmiri, osimiri, osimiri, ụgbọ mmiri, na idei mmiri. N'ime ọrụ nnapụta ọdịnala, ndị nnapụta gbara ụgbọ mmiri okpuru mmiri ma ọ bụ jiri aka ha banye ebe mmiri na-ada maka nnapụta. Ngwa ọrụ nnapụta ejiri rụọ ọrụ bụ ụgbọ mmiri okpuru mmiri, eriri nchekwa, jaket ndụ, akwa mmiri, wdg.
Okwu mmeghe Robot n'okpuru mmiri, nke a na-akpọkwa submeribles ndị a na-achịkwa nke ọma, bụ ụdị ụdị ọrụ mgbatị na-arụ ọrụ n'okpuru mmiri. Ebe dị n'okpuru mmiri dị egwu ma dịkwa egwu, ma omimi nke mmiri mmadụ adịghị oke, yabụ robot mmiri n'okpuru mmiri abụrụla ngwa dị mkpa iji mepụta oke osimiri. E nwere tumadi ụdị abụọ nke unmanned remotely achịkwa submersibles: USB remotely achịkwa submersibles na cableless remotely achịkwa submersibles. N'ime ha, ejiri eriri remot ...